BOODH KELI AH: XAKAMAYNTA CAYAYAANKA EE KUFSIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Boodhka jilicsan wuxuu leeyahay gebi ahaanba aan la samayn qoyska qoyska. Kuwani waa cayayaanka yaryar, madow iyo buluug, cayayaanka xayawaanka ah ee leh lammaanaha dib u laabashada. Haddii ay buuqsan yihiin ama cabsi qabaan, waxay u boodaan sida canjeeraha.
Maxuu u eg yahay boodada?
Qoyska boodhka jilicsan ayaa aad u ballaaran, oo leh noocyo badan. Cayayaanka ayaa u muuqda kuwo kala duwan, waxaa jira cayayaanka leh midab buluug, cagaaran iyo midab madow ee qolofta qotomiska ah, qaar ayaa leh dhar midab leh oo ku yaal baalal madow.
Lamaanadaha boodada qallooca ah ma aha oo keliya midab kale, laakiin sidoo kale qiyaaso kala duwan. Dhirarka ugu yar wuxuu gaari karaa 1.8 mm, ugu weynaana wuxuu u koraa 3 ml.
Cayayaanka oo ku dhaca cayayaanka hore ee Midowga Yurub, marka laga reebo waqooyiga faras. Waxqabadka muhiimka ah ee cayayaanka ayaa waxyeello weyn u geysta dalagyada qallalan.
Boodada jilicsan ee dumarku waxay dhigtaa ukumaheeda hareeraha ama godadka la googoosto ee xididdada dhirta ama dhulka dushiisa. Qaadida dirxiga oo ku dhuumanaya dhulka iyo dhowr toddobaad (inta koraysa), cuno xididada dhirta yar yar ama diirka dalagyada xididka. Halka ay ku quudiyaan, dhalatada dhalashada, iyo ka dib 10 maalmood ka dib dhalinyaradu u muuqdaan. Inta lagu jiro xilliga kuleylka 2-3 jiil ee dhirta qaxoontiga ah ayaa dillaaci kara.
Dadka waaweyn waxay doorbidaan jiilaalka dhulka ay ku nool yihiin oo ay ku badnaayeen xagaaga, ama dhirta weli ku jirta dalagyada qallalan.
Guga (Abriil - bilowga Maajo), sida ugu dhakhsaha badan ciidda kulaalaa, cayayaanka ayaa ka soo baxa hibernation. Ka hor inta caleemaha kowaad ee dalagyada, cayayaanka waxay cunaan dhirta qoryaha duurjoogta ah (bacda shaambada iyo caleenta).
Ka dib markii sprouts ugu horeysay ee cruciferous (rapeseed, dabocase, kaabajka) hatch, waxay u haajiraan beeraha iyo beeraha khudradda.
Cunista caleemaha yaryar, boodhka jilicsan ayaa wareegsanaya iyaga oo u maraya godad. Haddii aad adkeyso bilowgii dagaalka ka dhanka ah cayayaanka, kuwa lamid ah waxay cuni karaan ama waxyeeleyn karaan dhibta ugu weyn ee dhirta, way dhiman doontaa.
Laakiin si fudud ayaa loo googooyey, mararka qaarkood saldhigga qalfoof ee caleemaha, dhirta ayaa la dulmiyay, koritaankoodu wuxuu hoos u dhacayaa ama joojiyaa.
Cayayaanka ayaa jecel inay cunaan dhammaan dhirta jilicsan. Kooxdani waxaa ka mid ah: dhammaan noocyada kaabajka, radishes, garbaha, daikon, gawaarida, isbinaajka, malayga, dabocase iyo casaanyada. Waxay jecel yihiin boodada iyo ubaxa, iyagoo raalli ka ah Mattiola, Levkoy. Laakiin boodada jilicsan ee kufsiga ayaa ku keenta dhaawaca ugu badan.
Rapeseed waxaa lagu beeray qiyaasta warshadaha, oo leh goobo ballaaran, sababtoo ah dalaggani waa alaabta ceeriin ee ma aha oo kaliya wax soo saarka saliidda cunnada la cuni karo, laakiin sidoo kale saldhigga biofuels, qurxinta alaabta, nadiifinta iyo saliidaha farsamooyinka ee kala duwan.
Ma taqaanaa? Hawlaha ugu weyn ee cayayaanka - qeybtii hore ee maalintii iyo fiidkii hore. Galabtii, ee kulaylka ah ee lamid ah firfircoon.
Calaamadaha muuqaalka goobta
Haddii goobta beerta ama beerta lagu dhajiyo boodhka jilicsan, looma baahna in la sameeyo falanqayn iyo shaybaarka - waa sahlan tahay inaad aragto muuqaal ahaan. Tusaale ahaan, marka la baarayo dalagyada kudhaayaha, caleemaha waxyeeloobay ayaa la arki karaa, boodada jilicsan ee loo yaqaan caleemaha. Qaadashada habka qof, cayayaanka ayaa ku boodaya jihooyin kala duwan, taasina way adagtahay in aan la ogaan.
Waa wax ku ool ah in la bilaabo la dagaallanka boodhka jilicsan xilliga uu dalaggu dalbado abuurka caleemaha. Waa xilligaas oo dhirta ay ugu nugul yihiin cayayaanka oo ay si buuxda u burburin karaan (iyaga oo cunaya barta kobaca geedka).
Waxaa jira saddex ikhtiyaar oo lagula tacaalo cayayaanka:
ka hortagga dhacdooyinka cayayaanka.
Ma aha marwalba lagama maarmaanka u ah dagaalka ka dhanka ah cayayaanka si aad u tagto tallaabooyin adag iyo isticmaalaan kiimikooyinka, waxaad isku dayi kartaa inaad la qabsato hababka dhaqameed. Waa kuwan qaar ka mid ah:
Xaydhku ma jecla carrada qoyan. Si aad uga baxdid cayayaanka waxaad u baahan tahay inaad dhirta si fiican u biyo.
Cawska qabow ee caleenta caleen leh ash qallalan ama isku dar ah ash iyo boodhka tubaakada.
Suulinimada u dhaxaysa safarka (dhulka) baalalka ama boodhka tubaakada.
Mucaarida dalagyada geedaha geedo-geedeedka iyo fuska.
Ku dar 1 qaybood oo biyo ah karkaraya ilaa 1 qayb oo qoryo qoryo ah. Ku adkeyso 48 saacadood. Ku sii dar saabuun dareere ka hor inta aadan isticmaalin.
Xardhi hal galaas oo ah caleemaha yaryar iyo koob dhalada ah. Ku dar 10 litir oo biyo ah iyo 1 qaado oo saabuunta dareeraha ah. Faleebo waa diyaar.
Is dabajooga Booqday Furimaha Dagaalka hilibka ama qiyaasta 0.5 kg oo xididdada løndelion iyo caleemo. Ku dar qasacad isku dhafan iyo saabuun yar si aad ugu dhajiso baaldi biyo ah. Ka hor intaadan isticmaalin, adkee xalka uumiga.
Hal galaas oo ah jajabyo tubaako ku shub 10 litir oo biyo kulul, ku dar 1 qaado oo ah dareeraha ama saabuun (sifar).
Ku shub hal galaas oo khal (9%) ama 2 qaado oo khudrad ah oo khal u gali baaldi biyo qabow. Xalka waa in la isticmaalo isla markiiba ka dib diyaarinta.
Waa muhiim! Sariiraha kufsiga, kaabajka ama daboolka ayaa lagu beeray dhirta soo saara wax soo saarka. Xanuunada caleenta waxay ka fogaadaan xaafaddan waxayna door bidaan inay u guuraan meel nabad ah. Kuwaas gardarrada ah waxaa ka mid ah nasturtium, marigold, dill, toon, basal, calendula, yaanyada iyo baradhada.
Dareemaha noocan oo kale ah ayaa laga sameeyaa xaashida warqad, tufaax ama dhar (xaalada waxaa lagu taagay ul, sida calanka la macmalay). Dusha sare ee waraaqda (muraayadaha, tufaaxa) waxaa lagu daboolay walax adag (dufan, rinjin) oo ku dhaafaya sariiraha leh dhaqtar qalloocan.
Isla mar ahaantaana, dabinka waxaa lagu qaadaa hoos sariirta, ku dhowaad taabashada dhirta. Bugsadaha, cabsigeliyay joogitaanka qof iyo shey shisheeye, ayaa ku boodaya argagax iyo ku dheji dabin adag.
Qaar ka mid ah soo saarka boodada boodada sariiraha, iyo tirada cayayaanka ayaa yaraa dhowr jeer. Waxa ugu wanaagsan in la sameeyo habraaca noocan oo kale ah fiidkii, ka dib 18 saacadood kadib.
Raadinta adeegga baabuurka
Milkiilayaasha baabuurta ayaa had iyo jeer ka heli doona garaashka horumarinta saliidda mootada. Maro dhar ah (dhar) ayaa lagu qooyay farsamooyinkaas farsamo, oo la dhigay jidka loo maro sariiraha lafaha leh.
Waxa suurtogal ah in lagu dhajiyo daboolka dharka ee safarka u dhexeeya dalagyada. Si waxtar weyn leh, taangiyada noocan ah waxay u baahan yihiin in la soo jeesto hal mar ama laba jeer maalintii.
Daaweynta daaweynta miraha waxay ka hortagi kartaa waxyeellada dalagyada yar yar ee jilicsan. Insecticides iyo jeermis-dileyaasha ayaa si fiican u ilaaliya dhirta.
Haddii hadhuudhka beereedka (abuurka) aan hore loo shaqeynin, waa lagama maarmaan in la fuliyo hawlaha noocaas ah ee caleemaha ugu horeeya.
Tani waa sida dalagyada kudarka ah iyo dalagyada kale ee qallalan lagu shaqeynayo, iyada oo aan la sugin in la sugo biqilka oo buuxa, maadaama inta badan cayayaanka ay ku yaalaan dusha sare, iyagoo sugaya soo bixitaanka dalagga.
Xadka ugu sareeya ee cayayaanku waa 1-3 barbaro mitir labajibbaaran.
Si aad u baabi'id boodhka jilicsan isticmaal cayayaanka:
Alfa-Tzipi (Ivanhoe, Accord, Alterr, Alfas, Alfatsin, Alfashans);
Karate Zeon (Dahab, jab, Gladiator);
Alatar, Tabazol (Antiitlin, Tobacco Dust);
Xarumaha beerta, beeralayadu waxay heli karaan talo iyo talo faahfaahsan oo ku saabsan xulashada cayayaanka. Maaraynta xaashida waa in la sameeyaa fiidkii, sida heerkulka maalintii ee sarreeya diyaargarowga ayaa qayb ahaan ka luntay waxtarka. Haa, iyo fiidkii boodada fadhiya caleemaha dhirta.
Ma taqaanaa? Biyoolojiyeyaashu waxay kala soocaan kuwa lamid ah ee jilicsan ee mataha ah sida wakiilada koonfureed Kozyavkov oo ka soo jeeda qoysaska lamid ah caleemaha caleemaha.
Ka hor inta isticmaalka mass ee cayayaanka on aag ballaaran, waxaad u baahan tahay inaad horay u-geedi dhowr geedaha. Haddii daroogada la dalbado aysan waxyeeleynin dhirta, markaa dalagyada kale waxaa lagu buufiyaa kiimikooyin sun ah.
Haddii ay dhacdo in dhowr daaweyn oo tallaabo tallaabo ah laga bilaabo boodada isku dhafan ee loo baahan yahay, waxaa lagu talinayaa in la diyaariyo diyaarin kala duwan.
Markaad isticmaasho mukhaadaraadka firfircoon ee firfircoon, waa inaad si taxadar leh u raacdaa tilmaamaha kuxusan cayayaanka. Marnaba kama badna saamiga boqolkiiba ee walaxda iyo biyaha ee lagu sheegay tilmaamaha. Haddii uu roobku yaraado ka dib marka la buufinayo, nidaamku waa soo noqnoqonayaa. Waqtiga ku filan si loo baabi'iyo cayayaanka - 10 saacadood.
Waa muhiim! Waa in aynaan illoobin in qaadashada daaweynta kiimikada ee dhirta, waa lagama maarmaan in la isticmaalo qalabka ilaalinta qofka (maaskaro, gacmo gashi, dhar-gashi, dhar-gashi).
Intii aad ku sugnaan laheyd dhibaatada dhammaatay xagaaga oo dhan oo leh cayayaanka, waxaad qaadi kartaa tallaabooyin aad horey u soo saari karto:
Haddii aad isticmaasho xilliga qaboobaha ama qodaya carrada, ka dibna cayayaanka in ay degeen in ay jiilaalka ku dhiman doonaa marka barafku yimaado.
Sida ugu dhakhsaha badan ee barafka dhalaalayaa, waxaa lagama maarmaan ah in laga soo saaro ka soo haraaga khudradda beeraha ee kaabajka, xididka-jeeriga ee dabocase, cawska rapeseed iyo wixii la mid ah. Wax kasta oo la ururiyey ayaa si wanaagsan loo gubay. Cayayaanka ka soo baxay dhulka, oo aan helin cunto, waxay ka tagi doonaan sariirahaas, u haajiraan raadinta habab badan oo la heli karo.
Geedka dhirta lagu beeray inta u dhaxaysa safka cawska gooyay. Halka ayan jirin dhul furan, boodhyo jilicsan oo ku dhow lama muuqdaan.
Saameyn wanaagsan oo wax ku ool ah ayaa sidoo kale lagu faafiyaa meel u dhow dalagyada ama beeritaanka digaagga qajaarka ee tansy, yaanyo afkoda (gooyaa yaanyada digaaga).
Dhirta yaryar waxay quudiyaan dhowr jeer bilowga xilli sii kordhaya. Haddii warshadu ay xoog badan tahay, sareeyso, caleen waa ka badan tahay, siday u kala horreeyaan, way yar tahay cayayaanka. Xoogaa sida daciif ah ama dhirta yar yar.
Haddii sariirta leh dalagyada jilicsan oo aan aad u ballaaran, waxaa suurtogal ah in lagu daboolo agrofibre horaanta guga iyo in aan la sii wadi karin. Agrofibre kama hortagin helitaanka iftiinka iyo biyaha, laakiin waa caqabad ku ah cayayaanka.
Haddii dhirta dhirta ay dooneyso in ay sii wadato beeraheeda, waa inuu ku bilawdaa dagaalkii boodada jilicsan ee guga hore iyo sii wado si dhow ula socoshada dalagyada illaa dhammaadka xagaaga. Beergooysinnadu waxay noqon doontaa abaal marin la siiyo shaqada.